Akụkọ - Gini bu udiri mmezi nke ikuku nke ikuku
Mmiri purọọ R mgbapụta
Ikuku oyi mgbapụta
Gịnị Bụ ukpụhọde msdị Of Air oyi
Dị ka ọrụ ọrụ si dị, ikuku oyi nwere ike kere n'ime ntuziaka ụkpụrụ na akpaka ụkpụrụ.
1) adjustmentkpụrụ ndozi ntuziaka bụ iji dozie njirimara ọrụ nke onye ofufe ma ọ bụ onye mmechi site na ọrụ aka, dị ka mmeghe na imechi onye ofufe ma ọ bụ ịgbanwe agba agba agụ, ọsọ na oghere mmeghe iji gbanwee olu ikuku ikuku. Ọtụtụ-eji bụ kemeghi n'akuku ofufe (makwaara dị ka ntuziaka n'akuku ofufe) na ntuziaka shutter. Manual ukpụhọde nwere uru nke mfe na ngwá na ala n'ichepụta na-eri. Ma ụkpụrụ nchịkwa dara ogbenye, enweghị ike ịhazi ya n'oge, nke na-adịghị mma maka nkwụsi ike nke ngwaahịa (ọkara) mma. N'otu oge ahụ, ọ naghị enyere aka ịchekwa ike ikuku. Ọnọdụ ọrụ dị ezigbo mma, ihe ọkụkụ na-agbapụta site na eriri tube, ọnọdụ okpomọkụ dị oke elu, oghere ọrụ ahụ dị warara, na oge mmechi dị ogologo.
(2) ofzọ e si emegharị ụda ikuku nke ofufe bụ ịgbanwe ikuku nke ofufe na-akpaghị aka. Ndị akacha eji bụ akpaka nkuku na-agbanwe Fans na akpaka shutters. Enwere ike gbanwee akụkụ ọrụ nke onye ofufe ma ọ bụ ihe nkedo n'otu n'otu ma ọ bụ nchikota. N'agbanyeghị ụdị mgbanwe, enwere ike ijikọ ya na sistemụ arụmọrụ akụrụngwa. Usoro mmezi akpaka nwere ike belata ọrụ nke mgbasa ozi, jigide nkwụsi ike nke ọrụ, melite ogo ngwaahịa, melite ọnọdụ ọrụ ma belata ike oriri.
Igwe oyi bụ ụdị akụrụngwa nke na-eji ikuku ikuku dị ka ihe jụrụ ajụ iji jụọ ma ọ bụ tinye akwa mmiri dị elu na ọkpọkọ. Ọ nwere uru nke enweghị isi mmiri, nke kwesịrị ekwesị maka ọnọdụ dị elu na ọnọdụ nrụgide dị elu, ndụ ogologo ndụ na ọnụ ala ọrụ. Na ụkọ nke mmiri ego na ume na nkwalite nke gburugburu ebe obibi-echebe mmata, ikuku oyi na mmiri ịzọpụta, ike ịzọpụta na mmetọ-free e ọtụtụ-eji, Type na ngwa nke efere ụdị ikuku oyi
Post oge: Sep-23-2020